PressReader - Isolezwe ngeSonto: 2018-12-30 - IChiefs neBucs baphinde balahla izigidi ngo-2018
IChiefs neBucs baphinde balahla izigidi ngo-2018
Isolezwe ngeSonto - 2018-12-30 - EZEMIDLALO - MALIBONGWE MDLETSHE
NGONYAKA ophezulu osongwayo, u-2018, izinkunzi zaseSoweto iKaizer Chiefs ne-Orlando
Pirates, zibhale kabusha umlando kanobhutshuzwayo waseNingizimu Afrika ngokudayiswa kwamathikithi omdlalo wazo aphele ngesikhathi esiyirekhodi kodwa ziqhubekile nokulahla izigidi ngokushweba izicoco.
Abalandeli bala maqembu bawafake emlandweni bethenga amathikithi esemi-final yeTelkom Knockout obuseMoses Mabhida Stadium aphele emahoreni amabili nesigamu eqale ukudayiswa.
Unyaka nonyaka amaqembu adlala kwi-Absa Premiership abanga imali elinganiselwa kuR30 million ovela ezicocweni ezine.
Lezi zicoco yiPremiership ehamba noR10 million eqenjini elibengompetha, MTN8 enoR8 million, Nedbank Cup enoR7.5 million neTelkom Knockout efumbethe uR4 million. La maqembu abhekwe yisambane nje, abalwa namakhulu eNingizimu Afrika okuyiwona okuhlezi kulindelwe zibuzwe kuwo izicoco ngenxa yokuba namandla okuthenga abadlali abaphambili ezweni nabayithemba kwiBafana Bafana noma ababuya phesheya kwezilwandle.
IChiefs okuyiyo ebidume ngokuba ngaMakhosi ezicoco iqeda okokuqala unyaka wesine kulandelana ishwiba izandla. Kulo nyaka leli qembu esikhundleni sokuphakamisa izicoco, lisike iphethini lokushintsha abaqeqeshi njengeChippa United kaSiviwe Mpengesi.
IChiefs ihlukane isigubhukane noSteve Komphela ngo-Ephreli 21 ngemuva kokusuka kwezibhelu zaseMoses Mabhida Stadium ikhishwa yiFree State Stars kumasemifinal eNedbank Cup.
IChiefs ithole uR2.5 million ngokuphuma kwi-semifinal kanti iPirates igoduke noR200 000 wokukhishwa kwi-last 16.
KwiTelkom iChiefs ithole uR750 000 ngemuva kokukhishwa yiPirates kwi-semi final. Ezimnyama nazo azisimamanga kakhulu kulo mqhudelwano kwazise zibuyele ekhaya zipholisa induku yeBaroka ngoR1.5 million.
KwiMTN8 womabili la maqembu asule izinyembezi ngoR800 000 ongumthoba nhliziyo wabo bonke abahlulwe yilesi sicoco.
Kuzokhumbuleka ukuthi nakuyo iMTN8 bangene ngokuqeda belandelana ngemuva kompetha baka-2017/2018, iMamelodi Sundowns ababalwa nayo emaqenjini amakhulu.
U-R10 million umuke nayo iSundowns kwathi iPirates eqede endaweni yesibili yabamba umoya ngoR5 million. IChiefs endaweni yesithathu isule umlomo ngoR3 million.
Ngemuva kukaKomphela iChiefs iqashe uGiovanni Solinas kodwa ngemuva kwezinyanga nalo mqeqeshi wase-Italy ukhonjwe indlela kwabuyiswa u-Ernst Middendorp waseGermany, okunguye osekubhekwe ashintshe ukwenza ngo-2019.
IPirates yona iqhubekile nokhondolo lwayo lokufinyelela kweyamanqamu kodwa yehluleke ukuyinqoba. Kuyiwe ekhefini likaKhisimusi iqembu likaMilutin Sredojevic kuyilo elinconywa ngokudlala ibhola elihle kulezi nsuku.
Umbuzo uthi ngabe zizojika yini izinto lamaqembu aseSoweto akwazi ukususa ithunzi elimnyama ngo-2019 noma kuzoqhubeka nosizi?
Amakhosi azobuya ngomdlalo onzima lapho ezotholana phezulu neMamelodi Sundowns kanti iPirates izogijimisana neHighlands Park okuyiqembu elinabadli abakujikela esiswini njengotshwala.